Ungayikhetha kanjani ikhamera ehlakaniphile? Ncoma Ikhamera ye-1080P HD | LSVISION
Ungayikhetha kanjani ikhamera ehlakaniphile? Ncoma Ikhamera ye-1080P HD
Isikhathi siya emuva kweminyaka eyi-10. Uma umuntu angafaka ikhamera yokubheka, kufanele abe yisicebe kakhulu. Ngokuthuthuka okusheshayo kobuchwepheshe kulezi zinsuku, eminye imishini yokubheka okuphezulu kakhulu eyayibonakala sengathi isondelene nabantu. Imindeni ejwayelekile nayo iyakwazi ukuyikhokhela. Amanye amadola angasetshenziswa ukuqapha indlu, anakekele kude kwabadala nabancane, futhi abe nemisebenzi ehlukahlukene, futhi abanye bangadlala ukusakazwa bukhoma. Ngemuva kwalokho, njengoba amakhamera we-Smart ahlakaniphile aqala ukungena emizini yabantu ejwayelekile futhi asetshenziswa kancane kancane njengoba ubuciko bamakhaya bemindeni eminingi nangokwengeziwe, ukuthi ungayikhetha kanjani umkhiqizo onokwethenjelwa ekhaya ubaluleke kakhulu.
I-Wiring yokuqapha yendabuko iyaxaka, futhi ukuvela kwamakhamera ahlakaniphile kulekelele ukusetshenziswa kokuqapha. Njengomunye wemishini ebalulekile ebalulekile yokubhekwa kwevidiyo, amakhamera aguqulwe izinguquko ezinkulu kusuka esizukulwaneni sokuqala kuze kube manje. Kusuka kokumnyama nokumhlophe ukufaka umbala, ukusuka kumakhamera ajwayelekile kuya kumanje, amakhamera ahlakaniphile, njll. Izimiso eziyisisekelo azikaze ziguqukile. Ubuchwepheshe obujwayelekile kwikhamera kubandakanya izinkomba ezinjengezinkomba ezinamandla, ukuhlaziya okukhaliphile, okuchazwa ngencazelo ephezulu, kanye nokukhanyisa okuphansi. Ikhamera ibuye yathuthuka kusuka emisebenzini yokuhlaziya ehlakaniphile emibili noma emithathu efana nokutholwa kokunyakaza kanye ne-occlusion yevidiyo eyethulwe ngonyaka ka-2011 kuya ku-2011 kuya ku-2011 kuya ku-2011 kuya ku-2011 kuya ku-2011 kuya ku-2011 kuya ku-2011 kuya ku-2011 kuya ku-2011 kuya ku-2011 kuya ku-2011 kuya ku-2011 kuya ku-2011 kuya ku-2011 kuya ku-2011 kuya ku-2011 namuhla. Cishe wonke amakhamera abakhiqizi abakhiqizayo abanemisebenzi engaphezu kwe-10 ehlakaniphile. Vele, le misebenzi ehlakaniphile njengamanje ijwayelekile. Iningi labo livame ukutholakala kwimikhiqizo yezezimboni ephelele. Abasebenzisi bangayibukela ngqo kwizingcingo zabo eziphathwayo, futhi futhi bangasetshenziswa kalula ukunakekela izingane, asebekhulile kanye nezilwane ezifuywayo ekhaya. Ingasetshenziswa futhi njengethuluzi elihle kakhulu lamakhaya asebekhulile futhi livikele ukweba.
Ekhuluma ngokukhethwa komkhiqizo, izinhlelo ezivamile zokuqapha manje zinezidingo ezithile zokucaca. Uma nje ukuqapha okujwayelekile kungaba nokuqonda okujwayelekile kwendawo yokuqapha, kungakhomba izilwane, abantu, izimoto, imibala, izindlela zokuziphatha, izinkomba, njll., Akukho mfuneko ukuqashelwa kobuso noma ukuqashelwa kwepuleti yelayisense. Isibonelo, ukubheka isikwele, indawo enhle, kanye nemvelo. Kepha kulezi zinsuku, ukukhetha kokuqala kwemikhiqizo yokubhekwa kuyincazelo ephezulu, futhi konke kucacile. Okwesibili, ukuxhumana okungenantambo kumele kube bushelelezi futhi kunganamathele. Ngasikhathi sinye, uhlelo lokusebenza lunamandla amakhulu, futhi imisebenzi eyakhelwe ngaphakathi kumele ibe khona njengendlela yokulandela ngomkhondo ebusuku kanye nama-alamu kumele atholakale.
Izinqumo zekhamera emakethe ikakhulukazi zingama-720p no-1080p. Kube namakhamera anesinqumo esingu-480p ngaphambili. Yize kushibhile, isixazululo siphansi kakhulu futhi isithombe sibukeka sifiphele kakhulu. Kungumkhiqizo ophansi ophansi "ophelelwe yisikhathi". Kuyaqabukela ukuyibona. Ikhwalithi yesithombe se-720P sokulungiswa ingafinyelela ezingeni le-quasi-HD, empeleni eyanele kubasebenzisi basekhaya. Kodwa-ke, ngokuvuselelwa okuqhubekayo okuqhubekayo kwemikhiqizo yekhamera ehlakaniphile, amakhamera ahlakaniphile axhasa i-1080p athathe isikhundla esijwayelekile. Ukuze wenze ividiyo ibukeke icacile, inguqulo ye-1080p ye-Smart Camera ingashiwo ukuthi ingukhetho lokuqala lokuqala. Futhi manje i-1080P Resolution High-Desex I-Akhawunti ye-Akhawunti enkulu yengxenye enkulu yamakhamera wencazelo ephezulu yokuphepha. Imvamisa ukulungiswa kwesikrini kwe-1080p kungu-1920 × 1080, okungukungamaphikseli ayizigidi ezimbili. Manje ikhasi ngalinye lomenzi kanye nekhasi lomkhiqizo linemikhiqizo yalo eyi-1080p / 2 million pixel, okubuye kube yindlela yokuzikhethela.
PHAMBI Ukugubha iminyaka engu-100 yokusungulwa kweqembu lamaKhomanisi laseChina
Poe HD Monitoring wePulani Office OLANDELAYO